पूर्व मुख्यसचिव डा. विमलप्रसाद कोइरालाकाे नजरमा अहिले अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ ? - आयो खबर
पूर्व मुख्यसचिव डा. विमलप्रसाद कोइरालाकाे नजरमा अहिले अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ ?
२०७८, २४ चैत्र बिहीबार ०६:५०
पूर्व मुख्यसचिव डा. विमलप्रसाद कोइरालाले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानको लागि सरकार गम्भीर नभए श्रीलंकाजस्तो अवस्था आउनसक्नेतर्फ सचेत गराएका छन् । उनका अनुसार विदेशी मुद्रामा चाप परेको छ । हुन त अहिले आँत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन् । सरकारले चनाखो भएर उपयुक्त कदम चाल्नुपर्छ । सुधार गर्नुको विकल्प छैन् । तर, हामीले होस पुर्याएनौं भने श्रीलंकाजस्तो अवस्था हुनसक्छ।’
बजेट घाटा बढ्दै गयो भने त्यसलाई पूर्ति गर्नको लागि आन्तरिक र बाहृय ऋण लिनुपर्ने हुनसक्ने उनी बताउँछन् । उनले भने,‘बजेट घाटा बढ्यो भने गरिबी बढ्छ । सरकारले समग्र विकासमा असर पर्ने कुरामा खेलबाड गर्नुहुँदैन थियो । गएको एक वर्षदेखि यी वित्तिय समस्या देखा परेका थिए । कोभिड सुरु हुनासाथ आर्थिक मन्दी हुन्छ भनेका थियौं । आपूर्ति र वित्तिय व्यवस्था सबैमा कोभिडले धक्का दियो । महामन्दीजस्तै भयो । सरकार चनाखो हुन सकेन् ।’
अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले भने,‘अहिले हामी महाधक्काको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं। अब खतराको घण्टी त बजिसकेको छ । अर्थतन्त्रमा जटिल अवस्था छ । यसलाई राम्रै उपचारको विधि खोज्नुपर्छ । सुधारको बाटोमा जानुपर्छ । घण्टी बजिसकेपछि चेतिनुपर्यो । यो सुल्झाउन सकिने समस्या हो । सरकारले क्षणिक राजनीतिक तुष्टिको निम्ति अर्थतन्त्रको दीर्घकालिन स्वास्थ्यलाई खेलबाड गर्नुभएन ।’
प्रकाशित | २०७८, २४ चैत्र बिहीबार ०६:५०
मूल्यवृद्धि विरुद्ध आयल निगम अगाडि प्रदर्शन
सकियो मेलम्चीको अन्तिम सुरुङ खन्ने काम, दशैंअघि नै काठमाडौंका वासिन्दाले मेलम्चीको पानी खान पाउने